Biirto VOB: Sida loo milmaan / Isku dar / biir VOB Files
> Resource > Beddelaan > Sidee inay la midowdo / Isku dar / biir VOB Files
Haddii aad qabto taxane ah oo files VOB, kaas oo noqon kara qayb ka mid ah filimka la mid ah, waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad iyaga wada midowdo galay file fudud loogu isticmaalo dheeraad ah iDVD ama codsiyada kale. Halkan dhan-in-hal codsi Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) ( Wondershare Filmroa u Mac (Originally Wondershare Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac)) ) ayaa diyaar u ah si ay u caawiyaan. Waxaa kuu saamaxayaa inaad isku darsamaan files VOB si fudud oo dhaqso. Marka laga reebo samaynta dhamaystiran video file ah, aad si toos ah ayaa sidoo kale cusub, file dhameystiran gubi karaa in DVD disc ah haddii aad u baahan tahay. Sidaas gaar ahaan kuwa ku milmaan files VOB wada DVD ah playable, app this gabi ahaanba waa doorashada ugu fiican.
VOB midoobeen Easy in la isticmaalo: Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor)
Si fudud wada midowdo videos VOB tayo waayi maayo.
Saamaynta kala duwan video kala guurka si ha idinku hodmin aad videos.
Si fudud sameeyo video ah Picture-in-Picture (hab kale si ay ugu biiraan files VOB). Wax dheeraad ah >>
Hal-guji si ay u gubaan ururinta DVD ama wadaagaan on YouTube iyo Facebook.
1. VOB Load files inay ku biirto VOB this
Guji "Import" doorasho si shuban dhammaan faylasha VOB aad rabto inaad ku biirto kombiyuutar si ay album User ee. Haddii kale, si toos ah jiidi oo hoos u kuwan files VOB bartilmaameed ka disk adag tahay in heestii. Ka dib markii in, aad dareento doonaa videos daray waxaa lagu soo bandhigaa in ay leeg- ee barnaamijkan.
2. midowdo files VOB
Jiid kuwaas files VOB laga keeno ka album in ay Jadwalka ugu hooseysa ee isku xigxiga. Hubi in ay diyaarin si sax ah oo aan is dul saaran. Haddii loo baahdo, waxaad dhaqaajin karin bar slider si ay kaaga caawiyaan in aad u dhaxaysaa VOB gudbiyo fiican by zoom iyo Mozilla baxay. Haddii aad u baahan tahay in ay tirtirto qaar ka mid ah video clips, aad u muujiyo kartaa adigoo click fudud, ka dibna riix icon maqas ah.
By default, waxaa jiri doona kala guurka ma codsatay in ay videos VOB biiray. Haddii aad rabto in aad ku darto guurka dhexeeya clips, riix "guurka" tab on toolbar ah, iyo jiidi aad saamayn doonayay in uu booska diirada on waqtiga. Si aad ku dari guurka isla clips oo dhan, waxaad xaq u riixi kartaa kala guurka sida aad doonayso inaad dooratid "waxay khuseeyaan dhammaan". Waxa kale oo aad dooran kartaa "Random in All" in lagu daro kala guurka si toos ah in ilbiriqsi.
4. dhoofinta ah VOB video dhameystiran ama gubi in DVD
Riix "Abuur" badhanka in la furo dariishadaha wax soo saarka. Wakhtigan, waxaad dooran kartaa in la sii wado si loo badbaadiyo video cusub qaab VOB ama gubi abuurka video ay u DVD. Si aad u dhoofiyaan cusub, file a VOB weyn, kaliya aad u dooro "Qaabka". Haddii aad rabto in aad ku gubi in DVD, guji "DVD" tab, gelin ah DVD disk maran, oo markaas ha soo saaxir this app ee in aad ku dhex socdo geeddi-socodka la soo dhaafay.